JAHAWAREERKA SARIFKA SHILIN SOOMAALIGA. | SAHAN ONLINE
JAHAWAREERKA SARIFKA SHILIN SOOMAALIGA.
Arintan mid la mid ah waxay ka dhacday waddanka, khaasatan deegaanada Puntland laba xilli oo ay kala maamulayeen Puntland General Cadde Muuse iyo Dr. Clraxmaan Faroole balse waxay isku ahaayeen labadaas dhacdo kuwa liddi isku ah, mar waxaa hoos u dhacay shilin Soomaaliga marna waxaa qiimo dhacay sarifkii doollarka oo gaaray laba malyan in ka yar.
Xilligii Maamulka Cadde waxaa aad hoos ugu dhacay shilinkii Soomaaliga oo gaaray heer aad khatar u gashay maciiishadda, waxaase arinkaas xalkeedii la gaaray markii culimo, dowlad iyo dadwaynaba go’aan isku mid ah laga wada gaaray wixii asbaabta u ahaa arinkaas oo ahayd warshaddii lacagta ku samayn jirtay magaalada Bosaaso oo albaabada la iskugu xiray.
Dhacdadii kale ee xilligii maamulka Dr. Clraxmaan Farole waxa ay ahayd qiimo dhac ku yimid sarifka Dollarka suuqyada Puntland marka la bar bardhigo shilin Soomaaliga, taas oo uu kaga hortagay maamulkii xilligaas jiray markiiba tallaabooyin muuqda oo lagu xakamaynayo iyadoo qayb ka mid ah canshuuraha dowladda iyo mushaharaadkii shaqaalaha laga dhigay in Doollar lagu isticmaalo si loo yareeyo baahidii taagneyd ee Shilin Soomaaliga.
Hadda oo sarifka shilin Soomaaliga marka la bar bar dhigo doollarka uu sare u isii socdo , aysana weli muuqan tallaabooyin uu maamulku arinkaas kula tacaalayo ayaa dadku waxa ay muujinayeen maalmahan cabasho ay ka qabaan xakamayn la’aanta arintan sarifka shilinka Soomaaliga.
Inkastoo arinku u baahanyahay in loo daraaseeyo si cilmiyan ah haddana waxaa muuqata arimo saxdi ah oo qayb ka qaadan kara qiimo dhaca sarifka shilin Soomaaliga sida:
1. Wax ku kala iibsashada lacagta doollarka dhammaan noocyada macaamil ee bulshadu galayso sida waxbarashada, caafimaadka , mushaaraadka, bucshirada, sahal ku shubashada iyo xittaa canshuuraha dowladda oo doollar lagu qaado.
2. Soo galitaanka suuqyada sarifka lacago shilin Soomaali ah oo muuqda
3. Sariflayaasha lacagaha qalaad oo talaacub ku samaynaya sarifka si aan xad lahayn marka dalabka sarifka doollarku ku bato agtooda, xannibana in ay doolar baxshaan in ay qaataan mooyaane
4.Lacagta qaadka lagu cuno oo casarkii marka lagaaro doollar lagu kala badalo iyadoo xittaa haddii doollarku yar yahay ku dhiiri gasha sariflayda in ay ugu keenaan qiima kasta si markaas doollar ku heli karaan.
1. Maamulku isagoo ka mas’uul ah dalka iyo dadka waa in uu sameeyaa dhaq dhaqaaq uu arimahaas wax kaga qabanayo
2. Waa in la joojiyaa dhammaan ilaha ay ka imanayaan shilin Soomaaliga cusub ee suuqyada soo galaya sida lagu soo waramayo.
3. Dowladdu waa in ay dhiirigalisaa ku macaamilidda shilin Soomaaliga iyadoo nafteeda ka bilaabaysa sida in canshuurta iyo mushaaharaadka lacag Soomaali lagu isticmaalo
4. Sidoo kale waa in ay shacabka ku dhiiri galiso in lacag Soomaali lagu macaamilo sida waxbarashada , caafimaadka iyo bucshirada mar haddii maamulkii isagu iska bilaabay.
5. In wada xaajood laga furo in Sahalka sida ay suuragal u noqon karto in laga barbar furo qayb ku shaqaysa shilin Soomaali si la mid ah tan doollarka si loo qiima galiyo lacagta waddanka.
W/D: Maxamed Cabdullaahi